नेपाली काङ्ग्रेसका विशेषता भन्नु नै आधुनिक राज्य–सञ्चालनका विशेषताहरू हुन् - श्रीप्रसाद जी.टी ,नेता -नेपाली कांग्रेस - नेपाली काङ्ग्रेसका विशेषता भन्नु नै आधुनिक राज्य–सञ्चालनका विशेषताहरू हुन् - श्रीप्रसाद जी.टी ,नेता -नेपाली कांग्रेस
नेपाली काङ्ग्रेसका विशेषता भन्नु नै आधुनिक राज्य–सञ्चालनका विशेषताहरू हुन् – श्रीप्रसाद जी.टी ,नेता -नेपाली कांग्रेस
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १० आश्विन, 01:24:00 PM
समाजवादका हिमायती : स्याङ्जाका श्रीप्रसाद जी.टी.
– प्रा.डा. यमबहादुर क्षत्री
आफ्नै देशभित्र हामी भौगोलिक विविधता र सांस्कृतिक विविधता देख्दछौँ । यी विविध क्षेत्र र विविध संस्कृतिका बीचमा विभिन्न स्थानका व्यक्तित्वहरूमध्ये केही व्यक्तिहरूलाई विशेष गुणका कारण विशेष व्यक्तिका रूपमा लिन सकिन्छ ।
कलाका क्षेत्रमा होस् या विद्या र विज्ञानका क्षेत्रमा होस्, राजनीतिक–सामाजिक क्षेत्रमा नै किन नहोस्, केही व्यक्ति विशेष क्षमतावान देखिन्छन् । यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई पहिचान गर्ने र पहिचान दिलाउने प्रयास पनि चाहिन्छ ।
जुन व्यक्ति सामाजिक, राजनीतिक जीवन बाँचिरहेको हुन्छ, उसको जीवनले एउटा सिङ्गो युगको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । ऊ आफ्नो समयको उदाहरणीय व्यक्ति र भावी पुस्ताका लागि स्मरणीय व्यक्ति बन्न सक्दछ ।
स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र, र राष्ट्रियताका पक्षधर बन्दै राजनीतिक सङ्घर्षमा जोखिमपूर्ण जीवन व्यतीत गरिसकेका र हालसम्म देशको रहनसहन एवं राजनीतिक क्रियाकलापलाई समेत नजिकबाटै नियालिरहेका यस्तै खालका एकजना विशेष व्यक्तित्व हुन्– स्याङजाका श्रीप्रसाद जी.टी ।
यसपटक लक्ष्मी जयन्ती साहित्य समारोहको भेटघाटमा स्याङ्जा राङ्खोला पुग्दा म आफू एकजना साहित्यिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तित्व भएर पनि उनीसँग समाज र राजनीतिक विषयका प्रश्नहरू एकपछि अर्को सोधिरहन्छु ।
औपचारिक जानकारीका निम्ति यहाँले आफ्नो जन्म र जन्मस्थलको परिचय दिनुहुन्छ कि ?
– मेरो जन्म वि.सं. २००६ साल पौष १० गते शनिबारका दिन भएको थियो । मेरो जन्मस्थल पश्चिम नेपाल तत्कालीन गण्डकी अञ्चल, स्याङ्जा जिल्लाअन्तर्गत करेनडाँडा गाउँ पञ्चायत् र हाल पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं. १० घडेरीमा पर्दछ ।
घरपरिवार र शिक्षा–संस्कारका बारेमा जानकारी गराउनु हुन्छ कि ?
– मेरो परिवार मध्यम वर्गीय परिवार अन्तर्गतको काम गरिखाने किसान वर्गभित्र पर्दछ । मेरो बाल्यकालमा शिक्षा– संस्कारको वातावरण प्राप्त गर्न निकै दुर्लभ थियो । त्यतिवेला यत्रतत्र विद्यालयहरू थिएनन्, हाम्रो क्षेत्रमा तत्कालीन मातृभूमि प्रा.वि. पनि २०१० सालतिर मात्र खुलेको थियो । तापनि म त्यस स्कूलमा ढिलै पुगेको हुँ ।
जेहोस्, त्यतिबेला त्यसै स्कूलबाट मैले हाई–स्कूलसम्मको शिक्षा हासिल गरी २०२७ सालमा एस.एल.सी परीक्षामा पहिलो पटक सामेल भएँ, तर त्यस वर्ष सफल हुन सकिन । तत्पश्चात् मैले सक्रिय राजनीतिमा भाग लिएका कारण अर्को वर्ष क्रमिक रुपमा सामेल हुन सकिन, केबल २०३१ सालमा कास्की पोखराको कारागारभित्रैबाट परीक्षा दिई द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको हुँ ।
युवा अवस्थामा क–कसको सङ्गतबाट तपाईं राजनीतिमा आकर्षित हुनुभयो ?
– म युवा अवस्थामा निर्भीक नै थिएँ, देखेसुनेको कुरा बङ्ग्याएर नबोल्ने, जस्ताको तस्तै बोल्ने, कसैले अन्याय÷अत्याचार गरेमा त्यसको तत्कालै प्रतिवाद गरिहाल्ने बानी थियो, प्रतिवाद गर्दाको परिणाम र असर पछि कस्तो पर्न जाला त्यस बारेमा ख्याल राख्ने बानी थिएन ।
मेरो युवा अवस्था र विद्यार्थीकाल सँगसँगै व्यतीत भएको छ । त्यतिबेला राजनीतिक सन्दर्भमा पनि सामान्य रूपमा छलफल चलेकै हुन्थ्यो । संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था बलपूर्वक हटाइएको र पञ्चायत व्यवस्था शुरु भइसकेको हुँदा भित्री रूपमा प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी राजनीतिका कुराहरू सुन्न पाइन्थ्यो । प्रजातन्त्रवादीहरूको नेतृत्व वी.पी. कोइराला र अन्य नेताहरूको पनि योगदान रहेको कुरा सुनिन्थ्यो भने वामपन्थीहरूतर्फ पुष्पलाल श्रेष्ठसम्मको नाम सुनिन्थ्यो ।
अन्य नेताहरूको नाम त्यति सुन्नमा आएको थिएन । वामपन्थी राजनीतिबारे बहस गर्ने, छलफल चलाउने व्यक्तिहरूको पनि कमी नै थियो । तसर्थ, म विद्यार्थी अवस्थादेखि नै वी.पी. कोइरालाले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तप्रति आकर्षित भएँ, त्यसतर्फ राजनीतिक सम्बन्धहरू बढाउन थालेँ ।
वीपी जस्ता नेताबाहेक अन्य साथीहरूबाट पनि राजनीतिक प्रेरणा प्राप्त हुन सक्दछ । विद्यार्थीकालमा म जस्तै वी.पी को विचारसँग आकर्षित हुने अन्य व्यक्तिहरू पनि थिए – शिवकुमार अधिकारी, दीनबन्धु अर्याल, डा. शेषकान्त अर्याल, भुवनेश्वर लामिछाने, विश्वप्रेम अधिकारी, आदि । उहाँहरूबाट पनि राजनीतिक प्रेरणा प्राप्त भएको हो भन्ने कुरा म हालसम्म सम्झिरहेको छु ।
तपाईंले वी.पी. कोइरालासँग प्रत्यक्ष भेटघाट हुने अवसर कहिले प्राप्त गर्नुभयो ?
– वी.पी सँगको मेरो पहिलो भेट वि.सं २०२७ सालमा बनारसमा भएको हो, त्यसवेला मलाई उहाँसँग परिचित गराइदिने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो रङ्गेठाँटी सेतीदोभान स्याङजाका वेदप्रसाद पनेरु ।
नेपाली काँग्रेसको कार्यकर्ताको हैसियतले के–कस्ता सामग्री र सन्देश लिएर घरतिर फर्की आउनुभयो ?
–मूल सामग्री त तरुण पत्रिका नै हो, पञ्चायत व्यवस्था अन्तर्गत सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक दृष्टिकोणमा सकारात्मक प्रभाव पार्नु थियो । निरङ्कुश व्यवस्थाले नकारात्मक प्रभाव पार्ने र पारिरहेका तथ्यहरू विश्लेषण गरी जनतालाई प्रजातान्त्रिक मौलिक अधिकारहरूका सवालमा सचेत गराउने पम्पलेट सामग्रीहरू हुन्थे । त्यस्ता सामग्रीहरू बनारसमा तयार पारी देशभित्र पठाउने र ल्याउने काम अनवरत भइरहन्थ्यो, यसै कार्यमा मलगायत केही साथीहरू सङ्लग्न भई ती सामग्रीहरूका साथ नेपालभित्र आएका थियौँ र यसरी नै राजनीतिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहन्थ्यौँ ।
नेतृत्व तहको सन्देश त स्पष्ट नै थियो । संसदीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने, प्रजातान्त्रिक हक अधिकार एवं नैसर्गिक अधिकारलाई पुनस्र्थापित गराउने, राजा संवैधानिक प्रमुख रही रहने र अन्य सम्पूर्ण अधिकार जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा प्रत्यायोजन गराउने । यही त थियो हामीले देशभरि घुम्दै र फैलाउँदै आएको सन्देश !
एउटा गम्भीर सन्देशको भारी बोकेर आउँदा बिसाउनु पर्ने ठाउँ वा प्रचार गर्ने माध्यम पनि चाहिन्छ नै । ती ठाउँ भन्नु पार्टीसित सम्बन्धित भरपर्दो व्यक्तिहरू हुन् । त्यतिवेला आफ्नो जिल्लामा कुन–कुन व्यक्तिहरू जिम्मेवार व्यक्ति थिए भन्ने सम्झनु हुन्छ ?
–सबै नामहरू सम्झन गाह्रो छ, तर पनि केहीमध्ये किचनासका दण्डपाणि शर्मा, चक्रबहादुर खाँण, पिमबहादुर गुरुङ, कुलबहादुर गुरुङ, पेल्काचौरका कर्णबहादुर गुरुङ, हर्क गुरुङ, घिमिरे गाउँका हुमबहादुर गुरुङ, त्यस्तै, विचारीचौतराका स्थानेश्वर पौडेल, श्रीकृष्णगण्डकी जयपतेका शालिग्राम न्यौपाने, चापाकोटका भुवनेश्वर आचार्य, क्याक्मी सामाकोटका पूर्णबहादुर थापा, फेदीखोलाका तारापति सुवेदी, आरुखर्कका मोहनीप्रसाद पौडेल आदि थिए ।
त्यसवेला राजनीतिक वा बहुदलीय व्यवस्थाप्रति प्रतिक्रियाबादी बनेर केही मानिस समाजमा देखिन्थे । त्यस प्रवृत्तिको मूल कारण के ठान्नुहुन्छ ?
–निजी स्वार्थबाट प्रेरित भएर मात्र पञ्चायतलाई समर्थन र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विरोध गर्ने प्रवृत्ति खुबै हावी हुँदै गएको हो, अन्ततः यसका प्रभावले राजा र जनता दुवैलाई अहित हुने वातावरण सिर्जना गराइ दियो भन्ने लाग्दछ । तसर्थ, राजनीतिमा निजी स्वार्थलाई भन्दा समाज र समग्र राष्ट्रको स्वार्थलाई सर्वोपरी ठान्नुपर्दछ र मात्र समग्र देशवासीको कल्याण हुन सक्दछ भन्ने लाग्दछ ।
नेपाली काङ्ग्रेस वा वीपी कोइरालाको राजनीतिका मूलभूत विशेषताहरू संक्षेपमा बताउन सकिन्छ कि ?
–यो प्रश्न गम्भीर र जटील पनि छ, तर यसलाई अत्यन्त सरल अर्थमा बुझ्नुपर्दछ । नेपाली काङ्ग्रेसको मूलभुत सिद्धान्त बुझेपछि मूलभूत विशेषताहरू पनि बुझ्न सकिन्छ । राजगर्ने मात्र होइन, राष्ट्र नै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने वीपी कोइरालाको मूलभूत उद्देश्य थियो । राष्ट्रको अवस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई समेत मध्यनजरमा राखेर वी.पी. ले नेपाली काङग्रेसको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए । काङ्ग्रेसको सिद्धान्त तीनवटा अवधारणामा आधारित छ, स्वतन्त्रता, समाजवाद र राष्ट्रियता । नेपाली काङ्ग्रेसका विशेषता भन्नु नै आधुनिक राज्य–सञ्चालनका विशेषताहरू हुन् ।
हरेक राष्ट्रका नागरिकलाई स्वतन्त्रता चाहिन्छ । स्वतन्त्रताको अधिकार मौलिक अधिकार मध्येको सार्वभौम अधिकार हो । आफूखुसी चल्न, आय–आर्जन गर्न र आफू नै शासित रहन प्रतिनिधि चुन्न पाउने स्वतन्त्रता । चुनिएका प्रतिनिधिलाई काम गर्ने शैली र सिद्धान्त चाहिन्छ, त्यो शैली र सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट प्राप्त हुन्छ ।
जमीन कर, व्यापार कर, संपत्तिकर निर्धारण गर्छ, अनि यो विकास बजेटलाई राष्ट्रको हरेक अङग र क्षेत्र–क्षेत्रमा आर्थिकस्तर उचाल्ने गरी बाडँफाँड गर्छ र राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउँछ । चुनिएका नेता आवधिक प्रतिनिधि हुन् भने संवैधानिक राजा स्थायी राजप्रतिनिधि हुन् जो संवैधानिक अधिकारको सीमामा रहेर “राष्ट्रको अभिभावक” बनेर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई मजबूत राख्दछन् ।
यही नै थियो नेपाली काङ्ग्रेस र वी.पी. राजनीतिको विशेषता । राजा र जनताको सुमधुर सम्बन्ध रह्यो भने देशको सर्वाङ्गीण विकास द्रूततर गतिमा गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को आदर्श हो । यसैका आधारमा पछिल्लो अवस्थामा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति तय भयो । यसरी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति पनि नेपाली काङ्ग्रेसको विशेषता रहिआएको छ ।
के तपाईलाई वी.पी. सँग सम्पूर्ण नेपालको विकास गराउने मार्गचित्र थियो भन्ने लाग्दछ ?
–वी.पी. राजनीतिज्ञ मात्र होइनन्, उनी राजनेता नै हुन् । कुनै पनि राजनेताले समाज र राष्ट्रको मानचित्र उतारेकै हुनुपर्दछ । यही मानचित्रका आधारमा प्रत्येक कुनाकानी, गाउँ शहर, बजारका मानिसहरूलाई विकासमा परिचालित र सहभागी गराउन सकिन्छ । यसै मान्यतामा वी.पी. कोइरालाको सम्पूर्ण राजनीतिक दर्शन अडिएको पनि थियो ।
कुन कुन परिस्थितिवश उनी नेपालका राजा महेन्द्र र छिमेकी मित्र राष्ट्रका तत्कालीन शासकहरूसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्न सकेनन् भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
–यसअन्तर्गत कारण खोज्नुपर्दा व्यक्तिगत भन्दा पनि राजनीतिक कारण नै ठहर गर्नुपर्छ । त्यसबेलाको संसदमा दुईतिहाई बहुमत पनि अभिशापका रूपमा सावित हुन गयो । राजा र निहित स्वार्थप्रेरित तत्वहरूका स्वार्थमा कुनै पनि बील पारित नहुनुबाट आपसी द्वन्द्व सिर्जना भयो र देशभित्रैका प्रतिपक्षहरू बीच सुमधुर सम्बन्ध रहन सकेन ।
सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट वी.पी कोइराला दक्षिण एसियाकै एक राजनेतामा गणना गरिन्थे, यसैले पनि उनी दुई देशबीचको (भारत र चीन) सम्बन्धप्रति उनी गहन रूपमा सचेत थिए नै । सचेत रहँदारहँदै पनि भारतीय नेतृत्वका शीर्ष नेता जवाहरलाल नेहरू र वी.पी कोइरालाका बीच राजनीतिक व्यक्तित्वको टकरावका कारण वी.पी को राजनीतिलाई प्रतिकूल असर पर्न गएको र कुटनीतिक तवरले प्रतिकूल असर पारिएको पनि हुन सक्दछ ।
थोरैवेर विगततिर जाउँ, इतिहास प्रायः मौन रहन्छ, तर साक्षीका रूपमा उभिइरहन्छ । पञ्चायत अवधिभर के नेपाली काङ्ग्रेसका निष्ठावान कार्यकर्ताहरू तत्कालीन शासक र पञ्चहरूबाट प्रताडित भएकै हुन् भन्ने ठान्न सक्नुहुन्छ ?
–त्यतिवेला स्वाभाविक रूपमा ने.का.का निष्ठावान् र समर्पित कार्यकर्ताहरू विविध स्थानमा शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सबै किसिमबाट प्रताडित भएकै हुन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसबाहेक अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि के उत्तिकै पञ्चायत राज विरोधी थिए वा थिएनन् ? यदि थिए भने के ती पनि उत्तिकै दुःखदायी स्थितिबाट गुज्रनु परेको थियो ?
– अवश्यमेव, अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि उत्तिकै प्रताडित थिए, परन्तु राजा र पञ्चायत राजलाई सहयोग पु¥याउने हेतुले मात्र नामधारी कम्युनिस्ट बनेका व्यक्तिहरूले आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्ने र पञ्चायत विरोधी शक्तिलाई सकेसम्म प्रताडित गराउन सहयोग पु¥याउँथे । यसमा पनि पञ्चायती राजसत्ता सित सिधा टक्करमा जान सक्ने पार्टीका कार्यकर्ताहरू बढी प्रताडित हुने गर्दथे ।
मूलतः ने.का.को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको कारण २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भएको हो भन्ने मानिन्छ । यस अवस्थासम्म वी.पी.कोइराला राजा वा राजसंस्थाका विरोधी थिए कि पञ्चायत व्यवस्थाका मात्र विरोधी थिए ?
– वी.पी. कोइराला केवल पञ्चायती व्यवस्थाका मात्र विरोधी थिए, यो कुरा जनमत सङ्ग्रहको नतिजा बाहिर आएपछि उनले दिएका वक्तव्यहरूबाट स्पष्ट हुन्छ ।
राजा र राजसंस्थालाई सर्वोच्च राख्दै आएको पञ्चायत व्यवस्थालाई २०४६ सालको जनआन्दोलनले हटायो, बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भयो । यस परिवर्तनको श्रेय क–कसलाई दिनुहुन्छ ?
– बी.पी. कोइरालाको भनाइ थियो – राजा र नेता सबै संविधानको प्रावधानअन्तर्गत रहनु पर्दछ, कसैले पनि यसको सीमा उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन । नेपाली काङ्ग्रेस सदाकाल संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा छ, पञ्चहरू भनेका राजाका ऐजेरु हुन्, यिनिहरूले वास्तवमा न राजाको कल्याण गर्छन् न त देशको नै कल्याण गर्दछन् ।
यसर्थ, २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहको श्रेय त खुलम्खुला वी.पी. कोइरालालाई नै जान्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनको श्रेय भने ने.का.का सर्वाेच्च नेता गणेशमान सिंहलाई नै जान्छ, तथापि २०३३ सालमा वि.पी. कोइरालाले प्रतिपादन गरेको ‘राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति’ मा अडिएर राष्ट्रिय मेलमिलापका पक्षधर सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह र वामपन्थी मोर्चा समेतलाई दिइनुपर्दछ ।
बहुदलीय व्यवस्था पनि क्रमिक रूपमा हेरफेर र विकसित भइरहन्छ । तर २०५१ सालको मध्यावधि चुनावलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
–२०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव हुनु राष्ट्रका लागि अपूरणीय क्षति पुगेको कुरा ठहर गर्न सकिन्छ । यसको कारकतत्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको व्यक्तिगत महत्वकांक्षा र व्यक्तिगत स्वार्थलाई लिइनुपर्दछ । नेपाली काङ्ग्रेसअन्तर्गतकै आधिकारिक निकायहरूको समेत सुझाव–सल्लाहलाई पर्गेलेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरियो र पार्टीको अस्तित्वलाई नै गम्भीर असर पर्न गयो ।
२०५२ सालमा ने.क.पा. माओवादीले जनयुद्धको घोषण ग¥यो । १० वर्षसम्म यो युद्ध लम्बिएर शान्तिवार्ता पनि भयो । यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुभएको छ ?
– केही बाह्य शक्ति र केही देशभित्रैबाट अस्थिरता चाहने आन्तरिक तत्वहरू मिलेर गरिएको युद्धको घोषणा हो । अन्ततः बन्दुकबाट सत्ता प्राप्त नहुने भएपछि बाह्य शक्तिहरूलाई पनि मिलाएर दिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता गराएर जनयुद्धको अन्त्य गराइएको हो ।
तर युद्ध र सम्झौता दुबै नै राष्ट्रियताको पक्षधरतालाई टेवा पु¥याउने खालका थिएनन् । बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यासको क्रम र संक्रमणकालीन अवस्थामा जनयुद्धको थालनी हुनु र आफ्नै देशमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको उपयोग भइरहेको अवस्थामा विदेशी भूमिमा पुगेर सम्झौता हुनु यी दुवै यथार्थले राष्ट्रियताको आधारलाई कमजोर तुल्याएका छन् ।
२०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजसंस्थालाई निलम्बन राख्दै अन्ततः संवैधानिक राजतन्त्र नै हटाएर नेपालमा पहिलो पटक गणतन्त्र स्थापित भएको छ । यस परिवर्तनको सिलसिलामा देशको अस्तित्व र विकासबारे तपाइँको धारणा के रहेको छ ?
– म स्वयम् वी.पी. कोइरालाको सिद्धान्तबाट प्रशिक्षित व्यक्ति हुँ, त्यसकारण राष्ट्रियता नै प्रथमतः मजबुत हुनुपर्दछ । हाम्रो आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप वा घुसपेठ हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा अडिग रहेको व्यक्ति हुँ । २०६२/०६३ पछि त वैदेशिक शक्तिलाई नै आह्वान गरी विदेशी हस्तक्षेपलाई हामी आफैद्वारा आह्वान गरियो । यसले गर्दा राष्ट्रियता कमजोर भयो र हाल राष्ट्रिय अस्मिता खतरापूर्ण स्थितिमा रहेको छ भन्ने कुरा महसूस हुन आउँछ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि भारतीय पक्षले अघोषित रूपमा सीमा–व्यापारमा नाकाबन्दी लगायो, मधेश आन्दोलन भयो र पनि नेपालभरि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय चुनाव सम्पन्न भयो । तपाईंले यस विकासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– अघोषित नाकाबन्दीले देशको जनजीवन एवं अर्थतन्त्रलाई नै प्रतिकूल असर त पा¥यो नै, तथापि यसले हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई आत्म–निर्भरताको छुट्टै पाठ सिकाएको पनि छ । यहाँ यसलाई विस्तृत उल्लेख गर्नपट्टि नलागौँ । जेहोस्, आवधिक चुनाव हुनु र समय समयमा निर्वाचन क्रम दोहोरिरहनु लोकतन्त्रको एक सुन्दर पक्ष हो ।
नेपालका हरेक क्षेत्रका, हरेक वर्ग र जातजातिको रूपमा रहेका नेपाली नागरिकहरू आ–आफ्नो सीप र हैसियत अनुरूप श्रम लगानी गर्न तत्पर छन् । यस्तो अवस्थामा खासगरी राज्यद्वारा परिचालन गराइने क्रियाकलापहरू समाजवादमा आधारित हुनुपर्दछ । समाजवादी अर्थनीतिमा आधारित कर–प्रणाली लागू गरी आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने, वैदेशिक सहायताको दूरदर्शी रूपमा सदुपयोग गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई पनि समाजवादी नीतिअनुरुप सर्वसुलभ गराउँदै जाने हो भने देशका सम्पूर्ण नागरिक सवल र स्वस्थ रहन्छन् ।
नैतिक आचरणमा समेत सचेत नागरिकले देशको उन्नति/प्रगतिको हरेक पक्षमा रहेर योगदान पु¥याँउदै जान्छन् । देशको परनिर्भरता कम हुँदै जान्छ, स्वदेशको आत्मनिर्भरताबाट देशकै स्वाभिमान बढेर जान्छ । विकासको निरन्तरता र राष्ट्रको स्वाभिमानलाई सँगसँगै लैजान सकिन्छ । हाल नेपालमा तीन तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ, यो पनि लोकतन्त्रको त्यही सुन्दर पक्षको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
अन्त्यमा केही थप कुरा भन्नुहुन्छ कि ?
– धेरैजसो विषयवस्तुको उठान भएको छ, तैपनि म अझै एउटा विषयको उठान गर्न चाहन्छु । २०३६ सालतिरको कुरा हो, विद्यार्थीहरूको स्वतःस्फूर्त आन्दोलन चलिरहेको थियो । यस्तो स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा पनि विदेशीहरूको चलखेल भएको आभास पाउनासाथ वीपीले आन्दोलन बन्द गर्ने आदेश दिन्थे ।
त्यतिबेला पञ्चायत व्यवस्थाकै राज थियो, काङ्ग्रेस वा वामपन्थी आदि अन्य कसैको राज थिएन । तर जुनसुकै राजनीतिको आन्दोलनमा पनि आफ्नै खालको नियन्त्रण रहनुपर्दछ, अनि मात्र आफ्नो खालको उपलब्धि र अपनत्व जोगाउन सकिन्छ ।
हाम्रो जस्तो धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय विविधता भएको देशमा राष्ट्रिय एकता नै पहिलो अपरिहार्य तत्व हो । यसै तत्वबाट राष्ट्रको स्वत्व र अपनत्व कायम राख्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय एकतामा खलल ल्याउने, राष्ट्रिय एकताको बाँध फुटाउने जुनसुकै नीति र व्यवहारलाई कुण्ठित पार्न सकिएन भने राष्ट्रले आफ्नो स्वत्व र अपनत्व गुमाउन सक्छ; स्वत्व र अपनत्व गुम्दै जाँदा आखिर नेपालीको स्वाभिमान नै खतरामा पर्न सक्छ । यसर्थ, राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई हामी नेपालीहरूले एक साझा नीतिका रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा हामी सबैका लागि अपरिहार्य छ भन्ने ठान्दछु । अस्तु !
२०७५, १० आश्विन, 01:24:00 PM